नीतिगत निर्णय हेर्ने बाटो खोलौँ कि ! – Chitwan Post
नीतिगत निर्णय हेर्ने बाटो खोलौँ कि !
भ्रष्टाचार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ढिलै भए पनि ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाउँमा लगी भ्रष्टाचार गरेका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान पूरा गरी गत माघ २२ गते १७५ जनामाथि कारबाही गर्नुपर्ने बिगो माग दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा यसले निकै ठूलो हलचल पैदा गरेको छ । खासगरी, कसैलाई उन्मुक्ति र कसैलाई भने ठूलो बिगो तोकिएकोमा नेपाली कांग्रेसले घोर आपत्ति प्रकट गरेको छ । सँगसँगै उसले सडक र सदन दुवै तहबाट दबाब सृजना गरिरहेकोमा माघ २९ बाट सदन सुचारू तुल्याउने निर्णय लिएर आप्mनो कठोर कदमबाट एक कदमपछि हटेर आप्mनो कोर्स करेक्सन गरेको पनि छ । उसले गच्छदारलाई कानुनी लडाइँ लड्न सुझाव दिँदै राजनीतिक लडाइँ आपैmँले लड्ने जनाएको पनि छ ।
हुन त, यसबीचमा कांग्रेसले अनुपयुक्त विषयमा हात हालेको, गच्छदारको आर्थिक छवि पनि त्यति पारदर्शी नरहेको स्थितिमा उनलाई काँध हालेर बोकिहिँड्नु भनेको जानीजानी पहराबाट हाम फालेसरह रहेको, अदालतमा प्रवेश गरिसकेको विषयमा हात हालेर पनि नराम्ररी फँसिरहेको प्रतिक्रियाका माझ उसले आफूलाई सच्याउन खोजेको हुन सक्तछ । संघीय संसद्का सभामुखले पनि पटकपटक अदालतमा प्रवेश गरिसकेको विषयमा किचलो उठाएर संसद् अवरोध नगर्न आग्रह गरिरहेको स्थितिमा पनि उसले आफ्नो कोर्स करेक्सन गरेको हो कि भन्ने देखिन्छ । सँगसँगै कांग्रेसले अहिले अख्तियार सरकारको छाया बनेको अभियोग लगाएको छ । हुन त, कांग्रेसले अदुअआद्वारा केकस्ता कारण देखाई के–केका आधारमा माग दाबीसहित गच्छदारका विरूद्धमा मुद्दा दायर गरिएकोे छ भन्नेबारे सामग्री मगाएर त्यसको गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान नै नगरी हचुवाकै भरमा बहकिएर आन्दोलित भएको भन्ने आरोप पनि लागेको छ र कदाचित यसमा सत्यता रहेको तथ्य उसले कोर्स करेक्सन गरेको सन्दर्भबाट पनि खुल्दछ ।
पद र पैसाको दुईखम्बे नीति लिएका गच्छदारविनाको मन्त्रिपरिषद् बन्ने भन्ने कुरा कुनै बेला आश्चर्यको विषय बन्ने गथ्र्यो । विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा गरिएका निर्णयलाई आधार बनाएर घोटाला प्रकरणमा गच्छदार दोषी रहेको भन्ने ठहर आयोगको देखिन्छ । हुन त, उनले पटकपटक यस विषयमा आफू निर्दोष रहेको सार्वजनिक सभा समारोहमा पनि भन्दै आएका पनि छन् । यति हुँदाहुँदै पनि आयोगले उनीमाथि जुन अभियोजन पत्र दायर गरेको छ त्यसका पछि उनी दोषी रहेको प्रमाणित गर्ने धेरैवटा स्पष्ट आधार रहेको हुनसक्तछ । यस तथ्यलाई आन्दोलनरत पक्षले अध्ययन नगरेको कि जस्तो लाग्दछ । जुन समयमा उनी दोषी छन् भनेर सम्बन्धित निकायबाट अभियोग सार्वजनिक गरियो त्यसदेखि यता उनले आपूm निर्दोष रहेको तथ्य जुटाउन सक्नुपथ्र्यो । शायद त्यो जुटाउन सकेनन् ।
चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय पोल्ट्री प्रदर्शनी सुरू
सकियो बजार विश्लेषणसम्बन्धी प्रशिक्षण
ललिता निवास जग्गा घोटालाका निर्णय हुँदाका मन्त्रिपरिषद्का बैठकहरुमध्येमा तत्कालीन एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले दुईवटा र तत्कालीन नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले एकपटक अध्यक्षता गरेको हुँदा यसमा उनीहरु पनि दण्डको भागीदार हुनुपर्ने हो, तर उनीहरुलाई यसमा चोख्याइयो । तर, प्रस्ताव टेबुल गर्ने गच्छदारलाई मात्र दण्डित गरिनुले यसमा राजनीतिक पूर्वाग्रह स्पष्ट भएकोे कांग्रेसको तर्क हो र लाल झन्डा ओढेपछि नेता र कार्यकर्ताहरु दण्डमुक्त बन्न गएको भन्दै कांग्रेस नेतृत्वका आक्रोश चुलिएको हो । कांग्रेसका नेतागणको यो कथनमा सामान्य नजरले हेर्दा दम रहे पनि कानुनी हिसाबले कति दम राख्तछ, त्यो अध्ययन अनुसन्धानको विषय हो । आयोगको कार्यालयमा पुगेर आपूmले लिएको जग्गा फिर्ता गर्ने वाचा गर्नासाथ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका पुत्र नवीन पौडेलले पनि उन्मुक्ति पाउनुलाई कांग्रेसले पचाउन सकेको देखिन्न । कदाचित सर्वसाधारणलाई पनि यो पचिरहेको लाग्दैन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी तथा पूर्वमुख्यमन्त्री लीलामणि पौड्याललाई मुद्दा नलागेकामा कांग्रेसले जुन ध्यानाकर्षित गरेको छ त्यो पनि विश्लेष्य देखिन्छ ।
अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि ‘त्यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउने मैले’ गच्छदार भनिरहेका थिए । उता ठीक यसैबेला नेता माधवकुमार नेपाल यस प्रकरणमा आपूm निर्दोष रहेको जिकिर गरिरहेका थिए । सामान्य जनताका आँखाले हेर्दा नेता नेपाल र डा. भट्टराईको आर्थिक लाभमा संलग्नता रहेको थियो या थिएन वा अरु नै कुनै पारिवारिक सदस्यहरुले पो त्यस्तो कुनै लाभ प्राप्त गरेका पो थिए कि ? त्यो अझै सूक्ष्म अध्ययनको विषय रहेको होला । त्यही सन्दर्भ गच्छदारको हकमा पनि लाग्छ ।
कुनै त्यस्तो आर्थिक लाभ नलिएको सन्दर्भ रहेको भए निर्दोष हुँदाहुँदै पनि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षका नाताले नेता नेपाल र डा. भट्टराईले पनि जग्गा बिक्रीका लागि गरिएका निर्णयको नैतिकरुपमा जिम्मेवारी लिँदा उनीहरुको कद अझै बढ्ने देखिन्छ । हुन त, अदुअआको ऐनमा मन्त्रिपरिषद्द्वारा नीतिगतरुपमा गरिएका भनिएका निर्णयहरुमा आयोगले हेर्न र अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकाले अख्तियारले त्यसको फाइल झिकाएर अध्ययन अनुसन्धान गर्न पाएको देखिन्न । यसैले, तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय हेर्न नपाउँदा उनीहरु दोषी वा निर्दोष के रहेका छन् भन्ने निरुपण गर्न मिलेको देखिन्न ।
यसमा नेपाली कांग्रेसले सडकबाट रोइला गाउनुभन्दा अब अदुअआकोे ऐन नै संशोधन गराई मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सम्पूर्ण नीतिगत तथा अन्य सबै खाले निर्णयहरु अध्ययन गर्नका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने बाटो खोल्न सरकार र सदन दुवै तहबाट दबाब सिर्जना गर्नुचाहिँ बुद्धिमानी हुनसक्तछ । यसपछि कुन–कुन प्रधानमन्त्रीले केकस्तो नीतिगत निर्णय गराई भ्रष्टाचार गरे सबै दूधको दूध पानीको पानी आइहाल्छ । यसमा कांग्रेसले आवाज उठाउन सक्छ ? त्यो उसले सक्नुपर्छ, अनिमात्र जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह भएको मानिएला । तर, ऐन संशोधन गराउने विषयमा कांग्रेस जाला नै भन्ने लाग्दैन । तर, ऊ यसमा जानु जरूरी देख्छु म पनि ।
यसो गरेमा अख्तियारको आँखा छल्न र कारबाहीबाट जोगिन मन्त्रिपरिषद्मा लगेर नीतिगत निर्णय गराई अरबौँ रकम घोटाला गर्नेदेखि नीति बनाएर गरिने भ्रष्टाचारहरुका निम्ति सधैँका लागि प्वाल बन्द भई आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायम हुनमा सहयोग पुग्न सक्तछ । जहाँसम्म नवीनको सन्दर्भ छ, जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता आए पनि मुद्दा दर्ता गराइएको र अदालती प्रक्रियाबाटै सबै बिगो तिरी अभियोजनबाट मुक्त हुने प्रक्रियामा लैजानु उपयुक्त हुनसक्तथ्यो । यसले विवाद हुने अवस्था आउने सम्भावना कम रहन्थ्यो र आयोगको निष्पक्षता र सरकारको दूरदर्शिता पनि झल्कन्थ्यो नै ।
आयोगले सम्पूर्ण अध्ययन सम्पन्न गरेपछि केही दिन मुद्दा हाल्न ढिलाइ गरेको विषय पनि शंकाको विषय बनेको छ । आयोगले सरकारको जवाफ खोजेको थियो वा कुनै प्रतिक्रिया बुभ्mन चाहेको थियो वा थिएन त्यो अझै गर्भमै छ । अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई अझ सूक्ष्मरुपमा अध्ययन गर्न वा ठन्डा दिमागले पुनर्मूल्याङ्कन गरेरमात्रै निष्कर्ष निकाल्न केही दिन पर्र्र्खिएको भए त्यसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन भन्ने लाग्छ । त्यसो त, यस भ्रष्टाचार प्रकरणमा भूमाफिया पर्नुपर्ने हो, परे नै । लोभले लाभ लाभले विलाप बनाउनु नै थियो भूमाफियालाई । तर, यहाँ राष्ट्रिय जीवनमा उचाइ बनाएका अग्ला कर्मचारी पनि संलग्न देखिए ।
अझ त्यसमा पनि नेपाली भाषासाहित्यका क्षेत्रमा सगरमाथा चुमिसकेका दिनेश अधिकारीजस्ता प्रतिभाको संलग्नता देखिनुचाहिँ असाध्यै अस्वाभाविक लागेको छ । साहित्य क्षेत्रमा लागेका मानिसमाथि धेरैले श्रद्धापूर्वक विश्वास गर्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुको व्यक्तित्व स्खलित हुँदा त्यसले समग्र क्षेत्रलाई असर पारेको देखिएको छ । पानीको फोकाझैँ यस्ता विवादहरु उठ्तै र फुट्तै जान्छन् नै, तर दोषी ठूला माछा समाउने र कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्यमा तीव्रता आउनु जरूरी छ । ताकि, आज गल्ती गरिए पचास वर्षपछि पनि दण्डित हुन सकिन्छ भनेर त्यस्तो कर्म गर्नमा मन नजाओस् भन्ने सोचाइको पुनर्जागरण हुनु जरूरी छ ।